Ikhaya UMPHATHI we-FOOTBALL Ama-Chris Wilder Childhood Indaba I-Untold Biography Amaqiniso
I-LB iveza Indaba Egcwele Yomdlalo Webhola lezinyawo owaziwa ngegama lesidlaliso "Umphathi Wesikole Esidala". Indaba yethu yeChris Wilder Childhood Story Plus ye-Untold Biography Amaqiniso ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawuleka kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube manje.
Ukuphila nokukhuphuka kukaChris Wilder. Ama-Credits Wezithombe: I-LastSticker ne-Twitter.
Ukuhlaziywa kuhilela impilo yakhe yakuqala / isizinda somndeni, ukwakha umsebenzi wezemfundo, impilo yakhe esemncane, indlela eya odumo, ukukhuphuka edume ngodumo, impilo yobudlelwano, impilo yomuntu siqu, amaqiniso omndeni, indlela yokuphila namanye amaqiniso angaziwa ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi ungumphathi nomuntu okuthiwa 'Dinosaur'indlela yokuphatha ibhola, owenza izimangaliso ngokwenza iqembu lakhe le-Sheffield (kubiza okungaphansi kwe- $ 1m) qala isiqalo esihle sesizini ye-2019 / 2020 Premier League. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abalandeli bebhola abacabanga ukuthi inguqulo yethu ye-Chris Wilder's Biography iyathakazelisa impela. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Ama-Chris Wilder Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Isizinda Somndeni Nokuphila Kwasekuqaleni
UChristopher John Wilder wazalwa ngosuku lwe-23rd lwangoSepthemba 1967 eStockbridge, idolobha elincane nesifunda somphakathi esisedolobheni laseSheffield, eNgilandi. Yize azalelwe eSheffield, umphathi webhola lezizwe eziMhlophe waseBrithani onomndeni wakhe udabuka edolobheni laseNetherlands iLiverpool, okusho ukuthi ungumuntuIsikhafu'.
UWilder wakhula eceleni kwabazali bakhe, izingane zakubo futhi okubaluleke kakhulu, omalume bakhe ababenethonya elikhulu ekukhulisweni kwakhe. Uqhamuka emndenini ophakathi nendawo osezingeni eliphakathi nendawo osebenza ngubaba wakhe owazitholela indawo yokuhlala eLiverpool. Njengomfana omncane, omalume bakaWilder babenethonya elikhulu kuye ekuthandeni umdlalo. Iqoqo lakhe labomalume alizange limfundise kuphela ukuthi lidlala kanjani ibhola, kodwa futhi bamyisa e-Anfield ukuyobuka imidlalo yeLiverpool. Ngamazwi akhe;
“Sasivame ukuya ngoKhisimusi kanye namaholide esikole angajwayelekile. Ngaleso sikhathi lapho ngangivame ukuya e-Anfield nabomalume bami ababehlala endaweni ecebile, empumalanga yeLiverpool. Ngangiwabuka efaka nobaba wami edlala ibhola ngezikhathi ezithile ”
Ama-Chris Wilder Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Maphakathi namashumi ayisikhombisa, iLiverpool yayinokuphumelela okukhulu, inqoba konke- i-European Cup, i-UEFA Champions League, iNdebe yoMhlaba, i-European Super Cup / i-UEFA Super Cup njll. uChris Wilder ubese-Anfield ukuyodla ezinye zalezo zikhathi nobaba wakhe kanye nomalume, intuthuko embone engafuni enye into ngaphandle kokuba ngumdlali webhola.
Ngesikhathi ngisesesikoleni, uWilder wayeyijabulela yonke imidlalo, ikakhulukazi ikhilikithi. Yize eyisidlali sebhola lezinyawo, umgcini webhola wayesagxilwe kakhulu. Ukuze uphishekele amaphupho akhe, UChris Wilder ushiye uLiverpool endaweni yakhe yokuzalelwa eSheffield eyofuna amathuba ebhola. Wathola umsebenzi webhola lezinyawo eStockbridge Park Steels FC etholakala esifundeni iShersbridge waya eSheffield.
Kamuva, uWilder uthole isivivinyo esiphumelele neSouthampton njengomdlali webhola lezinyawo nomdlali we-academy. Njengomfundi othobekile, wabamba iqhaza ekuhlanzeni amabhuzu ebhola leSouthampton legend- UDavid Armstrong. Naphezu kokunikela ngokusemandleni akhe, uWilder ompofu akazange akwazi ukuthuthuka ngokusebenzisa isigaba sentsha yekilabhu ebholeni labadala. Ngokudabukisayo, wakhululwa ngenxa yokusebenza kabi ngaphandle kokuyenza waba seqenjini lokuqala leSouthampton.
Ama-Chris Wilder Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Umsebenzi Webhola Esifingweni
Noma yimuphi umdlali wentsha oye waphila Ukwenqatshwa kwezemfundo uzokwazi kahle kakhulu izinhlungu ezijulile ezingokomzwelo nemiphumela elimazayo yezengqondo engaba nayo. Ngemuva kokwehluleka ukwenza ibanga njengomdlali weSouthampton academy, uWilder ompofu wabuyela kuSheffield, idolobha lakhe lokuzalwa. Ngenhlanhla, uSheffield United wamemukela njengomvikeli.
Yize esengumdlali ophakathi nendawo, uSheffield wasiza uWilder ukwenza umsebenzi wakhe omkhulu. Lowo owayengumfana webhola akazange azithole esesikhathini seqembu lokuqala leqembu ngo-Agasti 1986. Ngesikhathi enza umsebenzi wakhe noSheffield, uWilder wazithoba ngokubolekwa kwemali nangamakilabhu e-11 ephelele ngaphambi kokujoyina iHalifax Town e1999, iklabhu lapho lagcina khona amabhuzu akhe. UWilder (osesithombeni ngezansi) uthathe umhlalaphansi ebholeni eneminyaka engu-34.
UChris Wilder uthathe umhlalaphansi kwi-34 eneminyaka yobudala bebhola. Isikweletu Sezithombe: BT
Ama-Chris Wilder Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Umgwaqo oDumela Igama
UChris Wilder esethathe umhlalaphansi waqala ukungena ekuphathweni kwebhola enenkolelo yokuthi uzokwenza kangcono yize eyisidlali sebhola esijwayelekile. Uqale umsebenzi wakhe wokufundisa ne-Alfreton Town ngonyaka we-2001. Ukuphathwa kwebhola njengoba bekulindelekile kwaqala kahle. Uthi bewazi?… Emasontweni amane nje we-27 ngemuva kokuphatha u-Alfreton, le ndoda yamaNgisi iwine izindondo ezine.
Ukuthatha isigaba esilandelayo emsebenzini wakhe wokuphatha, uWilder uqhubeke nokuphatha iHalifax ngemidlalo engaphezu kwe-300 kuze kwaba yilapho ikilabhu ingena ekuqedweni kwe-30 ngoJuni 2008. Lokhu kumiswa kuholele ekuhambeni kwakhe e-Oxford kwathi ngokuhamba kwesikhathi, kwiLigi Second Izimbangi, lapho wabaholela e League Two isihloko esinamaphuzu we-99.
Uthi bewazi?… UChris Wilder ngenkathi eseNorthampton engakhokhelwa izinyanga ezintathu, intuthuko eholele esimweni esidabukisayo kakhulu sokuthi ikhadi lakhe liye lehla kaningi ezitolo ezinkulu ezitolo. Mamphatha kabi !!!
UChris Wilder wehlise ikhadi lakhe lapho ekhokhelwa i-3 izinyanga. Isikweletu Sezithombe: owlstalk nezokukhokha
Ama-Chris Wilder Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Ekudumeni
Impilo kaChris Wilder esemehleni yezingqinamba zezezimali isindiswe yiNkosana yase-Saudi Arabia u-Abdullah, ongumnikazi weSheffield ememe ukuthi athathe izintambo zokuphatha nekilabhu. Ku-12 Meyi 2016, uWilder wajoyina iklabhu yakhe yobuntwana Sheffield United.
Ngokuxhaswa okuncane kwezezimali, uWilder wenza okuningi ayekuthola ngokudluliselwa kwamahhala. Wenza umsebenzi wakhe wokuqala ukuba; "Ukwenza abadlali bazizwe besekhaya". Ngenjongo yokufeza lokhu, umphathi ongekhohlakele waklebhula imibhalo ebukhali ka "Uyemukelwa eMsebenzini"Enkundleni yokuqeqeshwa kwekilabhu. Kuyena, kwakukhona iziqubulo ezingcono zokugqugquzelwa futhi abadlali babenzelwe ukuzizwa besekhaya.
UChris Wilder lapho ejoyina uSheffield waklebhula ngeziqubulo ezishukumisayo ezazidlala indawo yokuqeqeshwa. Isikweletu Sezithombe: I-SuFc kanye ne-Twitter
Naphezu kokuqala kabi kwesizini yokuqala, uWilder uqondise ikilabhu ekubeni yiLigi One Champions ethola amaphuzu e-100 kwinqubo (irekhodi leklabhu). Impumelelo yakhe yaqhubeka ngemuva kokungena kwiChannel Championship. Emqhudelwaneni, uWilder wahola uhlangothi lweSheffield United ekuzuzeni isicoco sakhe sesibili eminyakeni emithathu nje eklabhini.
Ngokubona impumelelo yakhe, wanikezwa imenenja ye-LMA yesizini ye2018 / 2019. UWilder wehluliwe Pep Guardiola kumklomelo yize umphathi weManchester City eqeda ukufaka imbobo yasekhaya.
UChris Wilder ubambelele kuMphathi wakhe we-LMA Wonyaka- 2018-19. Isikweletu Sezithombe: I-DailyMail
Ngemuva kokuletha iklabhu lakhe lasekhaya kwiligi kaNdunankulu, uWilder waqala ukwakha iqembu lakhe nxazonke UJohn Lundstram, isikhathi esisodwa u-Everton wenqaba futhi onobuhlakani bebhola edolobheni lakhe, iLiverpool. Ukunikeza abanye abadlali bakhe inkululeko yokusebenzisa wabona wonke umuntu efanelekile kumajigsaw eBlades. Isilo seWilder's Sheffield United ngesikhathi sokuloba ifakazele umphakathi webhola ngemuva kokuxoshwa abanye abalandeli njengoba kubaluleke kakhulu kwiPremier League.
Njengasikhathi sokubhala, umphathi weNgilandi ovela eLiverpool udalulwa njengomunye wabasunguli beqhinga lePremier League bokuqala ngemuva Pep Guardiola- konke ukubonga ukuqala okuhle okumangalisayo kweBlades kwisizini ye-2019 / 2020. Abanye, njengoba besho, manje umlando
Ama-Chris Wilder Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Ubudlelwano
UChris Wilder uyindoda eshadile. Kuqala wayeganwe ngumkakhe owayengunkosikazi wakhe ogama lakhe linguRachel Wilder futhi bobabili babenamadodakazi amabili amahle angaw; UMartha Wilder no-Evie Wilder. Ukhulisa izingane ngenkathi umyeni wakhe eqhubeka nebhizinisi lakhe lokufundisa, uRachel Wilder waphatha isitolo sezingubo zokugqoka e-Gap eManchester nase Sheffield.
Ngokwemibiko, kuye kwavela ukuthi unkosikazi wangaphambili kaChris Wilder (uRachel) akabuthandi ibhola, kwesinye isikhathi ukondliwa nalo kubukelwa amahora amaningi ekhaya lomndeni. Ngaphandle kwalokho, ubuka kuphela lapho iqembu lomyeni wakhe linqoba. Phakathi kwamadodakazi kaChris Wilder, kuphela Martha othanda ezemidlalo. U-Evie Wilder uyimfashini.
Ngemuva kweminyaka eminingi beshade umzali wabo, bobabili uMartha no-Evie baqala ukubona ubudlelwano obunciphayo phakathi kukamama nobaba wabo. Izinto zaqala ukuwohloka futhi kwaba omuncu kangangokuba a 'isehlukaniso' ubonwe njengenketho enhle yombhangqwana omdala.
UChris Wilder uqhubekele phambili ngemuva kwesehlukaniso. Ngemuva kwesikhashana, wahlangana nentokazi ebizwa ngeFrancesca eyachaza umhlangano wabo ngokuthi 'thanda 'ekuqaleni kokubona'. Bobabili uChris noFrancesca bashada ngosuku lokugcina lokudlulisa lwe-2017 (31st lukaJanuwari 2017). Olunjani usuku umphathi webhola ukuba ashade !!
Ama-Chris Wilder Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Personal
Ukwazi impilo kaChris Wilder uqobo kungakusiza ukuthi uthole isithombe esiphelele sobuntu bakhe kude nemisebenzi yakhe ekuhambeni kwebhola.
Ukuqala phansi, uWilder uyindoda eqotho esebenzisa indlela yobungcweti nejabulisayo yokugcina abantu benakekelwa nguye. Ukholelwa kakhulu enkululekweni futhi wayengeke ayithathe kalula uma kungasho lutho ukuthi ukukhohlisa kwakhe kulula. Isibonelo, uma wenze okuthile okumjabulisa, angakujabulela ukukutshela ukuthi ujabule. Uma wenza okuthile okungamjabulisi, uzokwazisa ngokushesha, kwesinye isikhathi ukwehlela njenge-a ithoni yezitini. Ekhuluma ngobuntu bakhe maqondana nokungabekezeleli ubuvila, wake wathi ''I-waiters yenzelwe zokudlela kuphela hhayi eyabadlali abahlulekayo ukubona amathalenta abo '.
Uthando Lakhe Ngobhiya & Wayini: Ukuxoxa ngempilo yakhe siqu ngokubuka kwezenhlalo, uChris Wilder uchazwa ngabaningi njengomuntu ohlala ehlangana (ikakhulukazi) nabangane bakhe bakudala abavela esithebeni lapho ethola khona indawo yakhe ukubona ubhiya wakhe awuthandayo.
Ukwazi i-Chris Wilder Life Life kude nebhola. Ama-Image Credits: izsearch, IStingStandards futhi BT
Uthi bewazi?… Izimbhangqwana ezimbalwa zikabhiya newayini enabasebenzi bakhe abaqeqeshi nabadlali abadala zihlala zihle njalo ngemuva kokuphumelela kakhulu.
Ama-Chris Wilder Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Komndeni
Umndeni kaChris Wilder ngesikhathi sokubhala uhlala e-Ecclesall Road, umgwaqo eSheffield, eSouth Yorkshire, e-England. Ngesikhathi sokubhala, uqinisekise ukuthi wonke amalungu omndeni enza imizamo eqotho yokufuna ukuqashelwa emphakathini.
Ngenxa yobudlelwano bomndeni, wonke umndeni wakhe onwebekayo uyawujabulela lapho ibhola limyisa eMerseyside ukuyodlala neLiverpool noma i-Everton. Lokhu kungenxa yokuthi umphathi weSheffield United wasebenzisa lezo zikhathi ukuxhumana futhi nomndeni wakhe eLiverpool. Noma iqembu lakhe lidlala i-Everton noma neLiverpool, uWilder uzithola ethenga amathikithi omdlalo kwabanye abaphikisi abachaza njengoMndeni. Ngakho-ke, ukudlala ngokumelene nomndeni wakhe kungumuntu uqobo ngoba ubaba wakhe uvela eLiverpool futhi iningi lamalungu omndeni wakhe kungaba abalandeli beLiverpool noma i-Everton.
Ngakolunye uhlangothi, abalandeli beSheffield basaqhubeka bethi uWilder ungowabo ngoba ukhulele edolobheni labo. Uthi bewazi?… UWilder uvame ukuthunyelwa ngotshwala be-'Ungomunye wethu'at Bramall Lane wakhe othandekayo. Lokhu kungenxa yokuthi abalandeli beSheffield bayamthanda futhi bakholelwa ukuthi naye ungumndeni.
Ama-Chris Wilder Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Indlela yokuphila
UChris Wilder uphila impilo ethobekile yize ethola iholo elihle njengomphathi. Esikhundleni sokusebenzisa izimoto ezinamakhandlela atholakalayo umholo wakhe angazithenga, wayethanda ukuhambahamba ngeSheffield ngezithuthi zomphakathi ikakhulukazi ngamabhasi.
Ngokwemibiko, uWilder kwesinye isikhathi usebenzisa isitobhu sebhasi i-Ecclesall Road eduzane nasekhaya, okuyisibonakaliso esikhombisa ukuthi unjani emhlabeni. Ngokungangabazeki, ungumluthi wokuphila okubizayo.
Ama-Chris Wilder Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Wake waba nguMfundi kuSir U-Alex Ferguson: Uthi bewazi?… UChris Wilder phakathi nezinsuku zakhe zokuqala zokuphatha wayengumfundi endodeni endala yaseManchester United eyaziwayo Sir Sir Ferguson.
UChris Wilder no-Alex Ferguson- Uthisha wakhe. Isikweletu Sezithombe: I-SUFC
Ngesikhathi sakhe e-Alfreton Town nase-Oxford, uWilder wayevame ukuhamba aye eManchester ayobona umphathi we-Legendary ngezifundo ezeluleka. Ekhuluma ngesipiliyoni, wake washo ngamazwi akhe;
“Wazinika isikhathi ukungisiza lapho. Wayejwayele ukukwenza kubaphathi abancane abaseBrithani, hhayi mina kuphela. Izinto ezinjengalezi zinginike amandla amakhulu.
Wake washayela ucingo ubusuku obandulela umdlalo wami wokugcina wokudlala ne-Oxford [bebhekene neY York e2010] futhi wadlulisela izeluleko ezimbalwa ezingisizile ukuwina. ”
Inkolo: Chris I-Wilder njengoba imindeni eminingi yaseLiverpool kukholakala ukuthi yavela emndenini wamaKristu. Kodwa-ke, kunezimpawu ezincane noma azikho nhlobo zokunamathela kwakhe enkolweni.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda iChris Wilder yethu Yobuntwana Indatshana ye-Plus Untold Biography Amaqiniso. At LifeBogger, silwela ukunemba nokungakhethi. Uma uthola okuthile okungabukeki kulungile, sicela wabelane nathi ngokubeka amazwana ngezansi. Sizohlala sazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
Usuku olushintshiwe: Septhemba 21, 2019